ပျင်းနေပါ သလား? ဒီ ဂီမ်းလေးတွေ က သင့်ကို စိတ်ကျေနပ် စေပါလိမ့်မယ်။ -
ပျင်းနေပါ သလား? ဒီ ဂီမ်းလေးတွေ က သင့်ကို စိတ်ကျေနပ် စေပါလိမ့်မယ်။
2 months ago Kaung Myat Phone Kyaw
iOS Banker Myanmar ကနေ Stay home ကာလမှာ iUsers iGamers တွေ အတွက် အပျင်းပြေ စိတ်ပြေ လက်ပျောက် ဆော့ကစား နိုင်ဖို့ best pick လုပ်ပေး ထားပါတယ်။
1.ပထမဆုံး Wilderless game ကို မိတ်ဆက် ပေးခြင်ပါတယ်။ Wilderless ဟာ Open world game အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး game ထဲမှာ ဘာဆို ဘာမှ လုပ်စရာ missions မရှိ objectives မရှိ enemies မရှိ။
သင် လုပ်စရာ ဆိုလို့ Wilderless ရယ့် ရင်သက်ရှု မောဖွယ်ကောင်းတယ့် ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ အပန်းဖြေ ဖို့ သက်သက် နေထိုင် လှုပ်ရှား နိုင်မှာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Wilderless open world area ဟာ တော်တော့်ကို ကျယ်တာမို့ သင့်ကို လုံးဝ စိတ်ပျက်စေမှာ ဟုတ်ပါဖူး။ ဒီ download link ကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းပါ။
2.Beyond Blue ဟာလည်း Wilderless နည်းတူ Open world game အမျိုးအစား ပါပဲ။ သူ့မှာကြ ရေအောက် က open world ဖြစ်ပြီး သိပ္ပံပညာ နဲ့ လူတို့ ရှာဖွေ တွေ့ရှိ ထားသမျှ ရေအောက် area တွေမှာ သွားလာ စူးစမ်း နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခါမှ ရေအောက် open world game တွေ မဆော့ဖူးရင် လက်တည့် စမ်းလိုက် တော့နှော်။
ဒီ download link ကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းပါ။
3.Boom boom ရုပ်ထွက် ကောင်းကောင်း နဲ့ story campaign တွေပေါ မှာ အခြေခံ ပေးထားတယ့် shooting game ကောင်းကောင်း ကို တောင်းတ နေရင်တော့ CoverFire က သင့် အတွက် ပါပဲ ရဲဘော်။ ဒီ download link ကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းပါ။
4.PS4 မှာ အရမ်း နာမည် ကြီးတယ့် Horror game ဖြစ်တယ့် Dead by Daylight ကို အချို့ကတော့ ကျွန်တော့ လိုပဲ သိပြီး သားဖြစ် မှာပါ။ သူက Asymmetrical4vs 1 type game မျိုးပါ။ တစ်ယောက်က ရူးသွက်နေတယ့် စိတ္တဇ လူသတ် သမား အဖြစ် ကျန် လေးယောက် ကို အဆိုးဝါးဆုံး ကြောက်မက် ဖွယ် နည်းလမ်း မျိုးစုံနဲ့ လိုက်လံ သတ်ဖြတ် ရမှာပါ။
အသက် အရွယ် ၁၇ နှစ် အထက် ကန့်သတ်ထားပြီး အသည်းငယ်သူ နှလုံး ရောဂါ အခံရှိသူ တွေနဲ့ မဆော့ သင့်ပါဖူး။ အပေါင်းအသင်း တွေနဲ့ စလား နောက်လား အောင်လိုက် လန့်လိုက် ရယ်ရယ် မောမော တပျော်တပါး ကြီး ဆော့ခြင်ရင်တော့ ဒီ download link ကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းလိုက်ပါ။
5.British Spy agency ကနေ Agent 8 ဆိုတယ့် ကမ္ဘာ့ smart အဖြစ်ဆုံး spyder robot ကို ဖန်တီး လိုက်ပါပြီ။ Agency က ပေးလာမယ့် လျှက်ဝက်တယ့် Missions တွေကို သင့်အနေနဲ့ Spyder နေရာကနေ ဖြေရှင်း ရမှာ ဖြစ်ပြီး သဲလွန်စ တွေ ရှာဖွေမယ် robot gadgets တွေ အသုံးပြုမယ် puzzles 🧩 game နှစ်ခြိုက်သူ တွေအဖို့ အတွက်တော့ ဆုလဒ် တစ်ခုပါ။
သင်လုံးဝ ခံစားဖူးမှာ မဟုတ်တယ့် Play style မျိုးကနေ ကစားရမှာ ဖြစ်ပြီး Game ရဲ့ environment ကတော့ retro universe မှာ အခြေခံ ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ robot သေးသေးလေး ဆိုပေမယ့် Spyder မှာ သင်ထင်တာထက် ပိုတယ့် လုပ်ဆောင် ချက်တွေ အပြည့်နဲ့ ဆော့ကစား နိုင်မှာပါနော်။ ဒီ download link ကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းပါ။
Admins ရဲ့ Favorite pick ကတော့ Wilderless, dead by Daylight & Spyder တို့ပါပဲ။ Wilderless ကတော့ Admin ထင်ထားတာ ထက်ကို အမျိုးကြီး ပိုတယ့် ခံစားမှုကို ပေးနိုင် ခဲ့ပါတယ်။
အားလုံးပဲ Enjoy playing ပါ
ရေးသားသူ-Kaung Myat Phone Kyaw
(iOS Banker Myanmar)
Previous 2K20 မှာ iPhone XR ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ? ဘယ်နေရာ မှာလဲ?
Next The Best iPhone SE (2020) Accessories
macOS Catalina ရဲ့ Font အသစ်တွေကို Free Download ပြုလုပ်နည်း
18 hours ago Myat Thura
2019 မှာ Popular အဖြစ်ခဲ့ဆုံး Smartphone Model တွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကရပ်တည်နေတဲ့ iPhone ဘယ် Model ဖြစ်မယ်ထင်လဲ
2020 Q1 မှာ တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ iPhone 11
4 weeks ago Kaung Myat Phone Kyaw
1 month ago Kaung Myat Phone Kyaw
Photos တွေကို Select all ဘယ်လို လုပ်သလဲ?
iPhone 11 Series မှာပါတဲ့ IP68 Water-Resistant Rating ဆိုတာက ဘာလဲ ?
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယနေ့အထိ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ထုပ်ပြန်ချက်အရ Corona Vrius ကူးစက်ခံရသူ ၂၃၂ဦး ရှိပြီး ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသူ ၁၄၃ဦး နှင့် သေဆုံးသူ ၆ဦး ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။